Bal ka waran hadii aad qabto Qaaxo iyo HIV? - somali
HIV wuxuu u wiiqaa difaaca jirka ee qofka cudurada hadii aan la daaweyna wuxuu horseedaa AIDS. Wey kuu roon tahay inaad ogaato inaad qabto HIV iyo in kale sababtoo ah daawo hadii aad isticmaasho waxaad ka hortagi kartaa in AIDS uu kugu noqdo. HIV waxaa lagu ogaadaa baaritaan dhiigga ah. Ayadoon cidna ku ogaan ayaad samayn kartaa baaritaan tusaale ahaana waxaa lagaaga qaadi karaa Guddiga AIDS-ka ee Finland xaruntiisa. Baaritaankiisu waa lacag la’aan. Baaritaan ku samaynta iyo ogaalka ah in qofku qabo HIV waa bilowga ugu wacan ee daaweyn wax ku ool ah, daryeel iyo taageero.
Hadii aad qabto HIV aan lagaa daaweyn, waxaa si fudud kuugu dhacaysa Qaaxo. HIV daaweyntiisu waxay horumarisaa difaaca jirka waxayna sidoo kale dhintaa halista aad ugu jirto inaad qaado cudurka Qaaxada.
Qof qaba HIV oo daawadiisa qaata, calaamadaha Qaaxadu waa qof aan qabin HIV oo kale. Waad qandhan kartaa, waad caatoobi kartaa ama xaako dhiig leh ayaad tufi kartaa ama miisaankaaga ayaa hoos u dhici kara.
Hadii daawo aan la qaadan HIV-ga ayaa kobca intaa kadibna calaamadaha Qaaxadu waxay isu baddali karaan xaalada guud oo wiiqanta, miisaanka oo hoos u dhaca iyo qandho darajo hoose ah. Qaaxo marar badan ayay ku dhici kartaa meelo aan sambabka ahayn, sida qanjirada ama lafaha. Hadii HIV aan la daweyn uu noqdo AIDS, Qaaxadu si dhaqso ah ayay u xumaataa oo xataa waxay horseedi kartaa geeri.
Hadii aad qabto HIV aadna la xanuunsato Qaaxo, waxaa lagugu daaweynayaa daawada HIV iyo tan Qaaxada labadaba. Qaaxada waad ka reysanaysaa inkastoo muddo dheer kadib ay tahay. HIV-ga ku haya wuxuu asagu u baahanayaa daaweyn socota inta aad nooshahay oo idil.
Xog dheeraad ah oo ku saabsan HIV: